Baayiden Kaadhimamaa Prezidaantummaa Dimokraatotaa Ta’uun Muudaman
Demokraatonni itti aanaa prezidaantii duraanii Joo Baayideniin kaadhimamaa prezidaantii gochuu dhaan gumii isaanii gama viidiyoon kaleessa geggeessame irratti raggaasisanii jiran.
Prezidaant Doonaald Traamp illee qeeqa dhiyeessanii jiru. Seenaan dhuunfaa Baayiden kan isaan hojjetaa mootummaa, abbaa fi abbaa warraa ta’uu isaanii dabalatee himamee jira jechuun Pasty Widakuswara Deliweer irraa gabaastee jirti.
Giifti duree Yunaayitid Isteetis ta’uu kan malan haati warraa Joo Baayiden Jiil Baayiden, gumii sana irratti haasaa dhageessisaniin dhiibbaa weerarri Koronaa ijoollee fi maatii irratti qabu dubbatanii waa’ee abbaa warraa isaanii fi mana barnootaa sadarkaa lammaffaa keessaa barsiisaa turanii fi bakka jireenyaa Baayiden Wilmington Deliweer ilaalchisees kaasuun dubbataniiru.
Jiil Baayiden akka jedhanitti Maatii adda faca’e attamiin guutuu taasisuu dandeessa? Akkuma biyya guutuu taasistutti, jaalalaa fi hubannaa akkasumas tattaffii garraamummaa hanga tokko itti dabaluu dhaani jedhan.
Muudamnii Angoo Kenname Ija Heera Biyyattiin Attamitti Ilaalama? Xiinxala
Taaboree’: Ayyaana Waggaa Ijoolleef Ayyaaneffamu
Mormiilee Oromiyaa Keessatti Geggeefaman Irratti Lubbuun Darbuun Ibsame
Abbaan Alangaa Gaazexeessaa Yaasin Jumaa Akka Hiikkamu Ajeja Kennuu Beeksise
Handaara Magaala Baamaakoo Irraa Dhukaasatu Dhaga'ama Jedhame